Toronto ilaa Las Vegas, Orlando, Tampa iyo Cancun on Air Canada Rouge hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Toronto ilaa Las Vegas, Orlando, Tampa iyo Cancun on Air Canada Rouge hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Caafimaadka Warka • Wararka Mexico • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Air Canada's airline airline, ayaa maanta dib u bilawday duulimaadkeedii iyada oo duulimaadyadu ka kala hawlgalayaan Toronto iyo Las Vegas, Orlando, iyo Regina, iyada oo meelo kale la soo bandhigay bishii Sebtembar, oo ay ku jiraan Cancun iyo Tampa.
Air Canada Rouge waxay ku soo noqotaa cirka iyadoo leh xulasho badan oo loogu talagalay dadka safarka ah ee firaaqada ah.
Adeeggii dib u bilaabmay wuxuu ka kooban yahay lebiskii la cusboonaysiiyay iyo madadaalada qulqulka oo la xoojiyay.
Waxaa la cusbooneysiiyay gudaha qolka si loogu helo diyaarado la xushay laga bilaabo dayrtaan.
Air Canada Rouge, oo ah diyaaraddii firaaqada ee Air Canada, ayaa maanta dib u bilawday duulimaadkeedii iyada oo duulimaadyadu ka kala hawlgalayaan Toronto iyo Las Vegas, Orlando, iyo Regina, iyada oo meelo kale la soo bandhigay bishii Sebtembar, oo ay ku jiraan Cancun iyo Tampa.
Shaqaalaha diyaaraddan Rouge ayaa ku labisan doona dhar cusub
“Air Canada Rouge waxay weli udub dhexaad u tahay istiraatiijiyadda guud ee Air Canada. Markaan ka soo baxno masiibada, waxaan filaynaa baahida sii kordheysa ee safarka fasaxa iyo macaamiisha duulaya si aan ugu raaxaysano booqashooyinka waqtigoodu dhammaaday ee qoyska iyo saaxiibbada. Air Canada diyaaraddeeda firaaqada ayaa ku habboon inay ku adeegto suuqan iyadoo leh goobo badan oo firaaqo ah iyo khibrad safar oo lagu martiqaado si fasaxyadu u bilaabaan isla marka ay macaamiishu raacaan diyaaradda Air Canada Rouge, ”ayuu yiri Jon Turner, Madaxweyne Ku -xigeenka Adeegyada Iftiiminta iyo Madaxweynaha , Hawlgallada Rouge, ee Air Canada.
Air Canada Rouge sidoo kale waxay bixisay muuqaal qarsoodi ah oo gudaha gudaha qolka oo la heli doono sagaal Airbus Diyaaradda A321 ee 39-diyaaradood ee Rouge Fleet, iyada oo adeeggii ugu horreeyey ee soo gelitaanka dabayaaqada dayrta.
Sagaalkan diyaaradood ayaa leh naqshad cusub oo gudaha ah oo casri ah oo leh lahjadaha sumadda Rouge waxaana lagu hagaajin doonaa kuraas maqaar ah, oo leh 30-inji oo fadhiga fadhiga ah ee dhaqaalaha Dhaqaalaha. Diyaaradda A321 Rouge waxay kaloo bixisaa ikhtiyaarrada awoodda shaqsiyeed ee la casriyeeyay, oo ay ku jiraan dekadaha USB-C, iyo ku haynta qalabka elektiroonigga ah ee habboon oo lagu daray kursiga fadhiga.
Markii dib loo bilaabay adeeggii Air Canada Rouge, oo la hakiyay ilaa gugii 2021, macaamiisha ayaa sidoo kale ku raaxaysan kara badeecadii iyo horumarintii naqshadaynta ee dhammaan diyaaradaha Rouge.